DKBA – Page2– democracy for burma
On October 20, 2014 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
#CLIP #၂၀၁၄ခုနှစ် ကရင်တော်လှန်ရေးနေ့မှာ ဗိုလ်ချုပ် နာဒါးမြနဲ့တွေ့ခဲ့စဉ်က
On October 16, 2014 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
ကရင်အမျိုးသားအလံတော်အောက်က ကရင်တော်လှန်ရေး တပ်ဖွဲ့တွေပါဝင်တဲ့ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ကရင်တော်လှန်ရေးနေ့ အခမ်းအနားမှာ နာဒါးမြ ပြောခဲ့တာလေးကို အမှတ်တရ တင်ပေးလိုက်တယ်။
“ကျနော်တို့တိုက်ရမှာ ဗမာ မဟုတ်ဘူး ၊ စစ်အာဏာရှင်ကို တိုက်ရမှာ အဲဒါ အဖေလည်း ခဏခဏပြောတယ်” CR. YAMOUNAR
#BURMA #MYANMAR #UNITY #KAREN #REBEL@ #Kawthoolei #Armed #Forces
On October 15, 2014 October 16, 2014 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
Saw Roger Khin said the cooperation agreement “was signed by the KNLA vice-chief of staff and the commander of the KNDO…through their own ideas.”It has been known for some time, however, that there are divisions within the KNU leadership. Baw Kyaw Heh, who has support of KNLA “hardline” brigades2and 5, and KNU vice-chairperson Zipporah Sein have expressed doubts over the direction of the KNU’s ceasefire negotiations with the central government and the Burma Army.
“I don’t see it isasign ofasplit within the KNU, because we all want to [unify] one way or another” with other groups, he said. “We are not against each other, although the two statements seem different.” see statement knu english
#DKBA #နိုင်ငံတော်ငြိမ်ချမ်းရေးထာဝရတည်တံ့ခိုင်မြဲံပါစေ။တစ်ဘက်မသာမာသူများ၏ #Media #၀ါဒဖြန့်မှုမှ လွတ်ကင်းကြပါစေ၊
နိုင်ငံတော်ငြိမ်ချမ်းရေးထာဝရတည်တံ့ခိုင်မြဲံပါစေ။တစ်ဘက်မသာမာသူများ၏Media ၀ါဒဖြန့်မှုမှ လွတ်ကင်းကြပါစေ၊ CR.Sanay Htun
On October 14, 2014 October 17, 2014 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
KAF နဲ့ မြန်မာ့ ငြိမ်းချမ်းရေး အလားအလာ Continue reading “#UPDATE #ကော်သူးလေ တပ်မတော် #KAF #အဖြစ် ပေါင်းစည်းမှု အငြင်းပွားဖွယ် ကောင်းပေမယ့် ကရင် လူထုများ ကြိုဆို” →
On September 27, 2014 September 29, 2014 By Burma Myanmar newsIn Burma, ThailandLeaveacomment
27/9/2014 Since today morning firefight has been taking place between Government Army and Democratic Karen Buddhist Army in the Thai-Myanmar border town of Myawaddy. Villagers outside the town of myawaddy fled into Thai side of the river Moei sailing along tai eyes .5 killed and 10 injured in clash
On September 16, 2014 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
NAY MYO ZIN : ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြု ကရင်တပ်မတော် DKBA ၁၉ နှစ်မြောက် တပ်မွေးနေ့ကို တိုင်းရင်းသား တဦးVIDEO
ဒီမိုကရေစီ အကျိုးပြု ကရင့်တပ်မတော် DKBA မှ ဗိုလ်မှူးကြီးစောစန်းအောင် နှင့် အတူ ၁၉ နှစ်မြောက် တပ်မွေးနေ့ မှာ အမှတ်တရ
ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြု ကရင်တပ်မတော် DKBA ၁၉ နှစ်မြောက် တပ်မွေးနေ့ကို တိုင်းရင်းသား တဦး အနေနဲ့ရော မြန်မာ့လူမှု ဘ၀ တိုးတက်မြင့်မားရေးကို ကြိုးပမ်းနေတဲ့ လူမှု နိုင်ငံရေး သမား တဦး အနေနဲ့ပါ လေးနက်သော ရည်မှန်းချက်များနဲ့ သွားတက်ခဲ့ပါတယ်။
တပ်မွေးနေ့ကျင်းပရာ ဆုံဆည်းမြိုင် ဒေသ ဟာ မြ၀တီ ခရိုင် ၀ယ်လေ မြို့နယ်သို့ အသွား အတော့်ကို လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲလွန်းတဲ့ ဒေသဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ နယ်စပ် ဟိုဘက် သည်ဘက် သောင်ရင်းမြစ်ငယ်သာ ခြားပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုက်တက်မှု အရတော့ အတော့်ကို နောက်ကျကျန်နေခဲ့တဲ့ ကရင်တိုင်းရင်းသားတို့ ဒေသဖြစ်ပါတယ်။
မွေးနေ့ မတိုင်မှီ ညဘက် အခမ်းနားမှာ တက်ရောက်လာသူထဲမှ အချို့ကို ဟောပြောခွင့်ပေးရာမှာ ကျနော်က လူမှုဘ၀ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး နှင့် အနာဂတ် ပြည်ထောင်စု ဆိုတာလေးကို အကျဉ်းမျှ တင်ပြဟောပြောခွင့် ရခဲ့ပါတယ်။
အခု ဖိုင်လ် လေးက တော့ မွေးနေ့မှ အပြန် လမ်းခုလတ် လွင်တီးခေါင် လမ်းကြမ်းကြမ်းမှာ ပြန်လိုက်ပို့ပေးတဲ့ တပ်ဖွဲ့ပိုင် ကားအကောင်းစားကြီး ခဲလုံးထိမှန် လို့ ထင်ပါရဲ့ ရေတိုင်ကီ ပေါက်သွားပြီး အင်ဂျင်ရပ်သွားတာနဲ့ နောက်ကား ကြုံကို စောင့်နေတုန်း အခိုက် အတန့်မှာ ရိုက်ကူးမှတ်တမ်းတင်လာတဲ့ ကျနော်ရဲ့ ခံစားမိသော အတွေးစိတ်ကူးလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။